Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka USB Silicon Power Murerfirma
Fadlan Help Me My ka Silicon Power Murerfirma Ladnaansho Documents masaxay
Sheekadu waa in aan ku kaydsan dokumentiyo badan oo ganacsi oo muhiim ah in aan Silicon Power Murerfirma F80 32GM USB 2.0, oo waxaan tirtiray oo dhan oo iyaga ka mid aan xitaa u ogaanaya. Waana inay yihiin mid aad u muhiim ii. Ma jirtaa xal kasta oo wanaagsan ii soo ceshano files aan? Ma waxaan u isticmaalay tan iyo markaas. Thanks.
Farsamo ahaan, xogta cusub ee Silicon Power Murerfirma suurto gal overwrite kartaa files lumay haddii aad go'aansato in aad u isticmaasho. Warka wanaagsan waa in aan isticmaalo qalabka tan iyo markii aad la tirtiro xogta. Tani waxay ka dhigan tahay inaad tahay jihada wanaagsan inuu ka soo kabsado xogta ka Silicon Power Murerfirma USB 2.0.
Waxaad iman kartaa internetka si aad u hesho barnaamij soo kabashada xogta flash drive caawimaad. Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani qalab kama dambaysta ah waa aalad muhiim u ah dib u soo ceshano xogta sida sawiro, videos, music, document files, files archive ka computer, drive dibadda adag, flash drive, iyo sidoo kale Silicon Power Murerfirma.
Hel version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery in ay marka hore baarista Silicon Power Murerfirma ah.
Qabtaan Silicon Power Murerfirma USB Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Halkan aynu ka arrinsashada soo kabashada iyada oo la isticmaalayo Windows version of barnaamijka Wondershare Data Recovery. Haddii aad tahay user Mac ah, waxaad samayn kartaa dib u soo kabashada la version Mac in talaabooyin la mid ah.
Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Data Recovery for Windows on your computer. Sida image hoos ku soo bandhigay, waxaad arki doontaa daaqad oo bixiya saddex hababka soo kabashada aad u.
Si aad u soo ceshano xogta tirtiray ka Silicon Power Murerfirma, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode. Haddii hab taasi ma hesho files lumay, waxaad isku dayi kartaa laba kale oo qaabab markaas.
Tallaabada 2 Scan Silicon Power Murerfirma USB u tirtiray Files
Halkan suuqa kala barnaamijka muujin doonaa oo dhan drives adag kombiyuutarka aad ku jirto USB Silicon Power Murerfirma, kaliya aad u baahan tahay si ay u doortaan oo guji "Start" in iskaan for files tirtiray.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad USB Scan Silicon Power Murerfirma in si wanaagsan loo xiran karo your computer.
Tallaabada 3 Xulo Ladnaansho Xogta laga USB Scan Silicon Power Murerfirma
Scan ka dib, content ka heleen lagu soo bandhigi doonaa qaybaha sida "Graphics", "Document", "Music" iyo in ka badan bidixda ee suuqa. Waxaad ku hubin kartaa in laga helo files waa waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama aan magacyadooda asalka file. Plus, waxa aad awoodi kartaa in ay ku eegaan sawirada ka hor soo kabashada aad.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad rabto in aad oo guji "Ladnaansho" si loo soo celiyo xogta ka USB Scan Silicon Power Murerfirma. Waxaa lagaaga baahan doonaa meel si ay u dhawrto xogta. Fadlan dooro gal on your computer ama qalab cusub oo lagu kaydiyo si ay u badbaadin.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka Silicon Power Murerfirma flash drive